Trano John Cena: Lowdown ao amin'ny tranon'ny Superstar misy sary - Wwe
Trano John Cena: Lowdown ao amin'ny tranon'ny Superstar misy sary
John Cena dia efa lasa lavitra tamin'ny toerana nanombohany. Nanandrana ny asany voalohany tamin'ny fananganana vatana izy ary avy eo niasa ho mpamily ho an'ny orinasa limosinina any Massachusettsusettes. Niady tamin'ny Ultimate Pro Wrestling nandritra ny roa taona teo ho eo izy talohan'ny nahazoany fifanarahana fampandrosoana miaraka amin'ny WWE, izay nandefasana azy tany OVW (Ohio Valley Wrestling), faritany fampandrosoana.
Ao amin'ny OVW, Cena dia niaraka tamin'ny andiany lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny fampandrosoana WWE, niaraka tamin'ny tian'i Brock Lesnar, Randy Orton, Batista, ary Shelton Benjamin. Tao amin'ny OVW, i Cena dia nantsoina hoe 'The Prototype'. Nahazo ny tompon-daka tamin'ny OVW Heavyweight tamin'ny fotoana iray aza izy, zavatra notazoniny nandritra ny 3 volana.
Nantsoina ho amin'ny lisitra lehibe izy tamin'ny volana Jona 2002, izay nanatrehany ilay medaly volamena Olimpika Kurt Angle tamin'ny fampidirana lehibe iray izay nahita fa ho avy ny tompon-daka eran-tany 15 fotoana fohy nefa nahazo ny fanajan'ireo mpankafy sy ny olona any aoriana. , ao anatin'izany ny The Undertaker.
Vakio ihany koa: Ny tantaram-pitiavan'i John Cena sy Nikki Bella
Tsy nijanona anefa ny fisehoan'i Cena ho an'ny OVW, volana vitsivitsy taty aoriana, rehefa resin'i Kenny Brolin izy tamin'ny 'resy miala ny lalao OVW'. Izany dia nanampy an'i Cena 'hanao ny voninahitra' teny am-pivoahana ary nanomboka nanorina ny tenany ihany koa tamin'ny lisitra lehibe.
Smackdown no toerana nanaovan'i Cena ny anarany. Rehefa nankany Smackdown izy dia teo an-tampony izany, namoaka ny herin'ny kintana toa an'i Kurt Angle, Brock Lesnar, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Edge, Chris Benoit, ary maro hafa. Niditra tao amin'ny rafitra i Cena ary na dia voditongotra nandritra ny fotoana maromaro aza (indrindra ny fotoana tokana nananany teo amin'ny asany), fa rehefa nahazo ny fanjakany tao Wrestlemania 21 nanohitra an'i JBL izy, dia azo antoka fa tena iray organika.
Tamin'izany fotoana izany dia izy sy Batista no kintana mafana roa miakatra an'ny orinasa, ary nanapa-kevitra ny hisafidy an'i Cena izy ireo noho ny The Animal hampandroso ny orinasa. Angamba izany no mety, satria nifidy ny hiala ny The Animal tamin'ny taona 2010 (ary tamin'ny 2014 indray), raha mbola nijanona i Cena. Cena izao dia manana fandaharam-potoana maivana kokoa noho ny teo aloha (izay azony tsara) ary nifindra tamina anjara asa tapa-potoana izy, nahatafiditra ny tenany tamin'ireo tia an'i Hollywood sy ireo seho an-tsehatra ary seho resaka, ankoatry ny hafa. Na izany aza, nambarany mazava fa mbola ao anaty WWE ny fony.
Eo amin'izay misy azy izao, izy no mpilalao franchise ary miaina amin'ny tranobe goavambe miaraka amin'ny sakaizany ary ilay kintana Smackdown Live Nikki Bella
John Cena sy Nikki Bella dia miara-monina ao Tampa, Florida ao an-tranon'ilay teo aloha. Tena nisokatra izy ireo fa amin'ny asa mafy rehetra ataony dia mankafy ireo zavatra tsara kokoa amin'ny fiainana izy ireo, izay misy dikany tanteraka ho an'ny olona toa azy ireo izay eny an-dalana hatrany ary manome famaritana vaovao momba ny dikan'ny asa mafy.Cena dia ny endrik'i WWE ary mahazo dolara an-tapitrisany maro ho an'ny orinasa isan-taona, ary ahazoana vola an-tapitrisany koa. Izy no fisarihana lehibe indrindra androany amin'ny WWE (ankoatr'i Brock Lesnar), izy no mbola superstar be karama indrindra amin'ny orinasa
Tombanana ho 35 tapitrisa dolara ny vola azony. Vao tsy ela akory izay dia nanao asa be tany ivelan'ny WWE izy, toy ny fampiantranoana fandaharana loka, fandaharana amin'ny fahita lavitra, fisehoana amin'ny filma, ary maro hafa. Anisan'ny lehilahy be atao indrindra i Cena, mijinja izay nafafiny ary voalaza etsy ambony, miaina fomba fiaina mihoa-pampana. Andao hijery kely ny tranon'ny Cena.
Fohy iray momba ny tranon'i Cena
Manomboka amin'ny fidirana lehibe ny tranon'i Cena:
Izany no idiran'ny olona rehefa miditra ny tranon'i Cena
Ny fidirana lehibe aza dia nampiasaina ho an'ny afisy fampiroboroboana ny seho vaovao Salama tanteraka izay nanomboka tamin'ny herinandro lasa:
Salama tanteraka afisy fampiroboroboana
John Cena dia manana efitrano sigara ao an-tranony izay natokana ho an'ny tompokolahy ihany. Tiany ny miditra any miaraka amin'ny olony ary mipetraka sy mankafy sigara iray na roa.
Fitaovana goavambe an'i Nikki:
Sary telo etsy ambony no hita eo amin'ny laharana farany, ny ilany havia ny efi-tranonao dia efitrano iray manontolo natokana ho an'ny akanjo sy kiraron'i Nikki Bella. Nikki dia miantso azy io ho ampahany tiany indrindra amin'ny trano iray manontolo.
Hita eo amin'ny laharana faharoa sy farany faharoa (samy eo ankavanany), ny fanatanjahan-tena amin'ny dobo goavambe iray dia toy ny loharano mahafinaritra. Oh, ary misy teboka antsitrika koa io!
Marina izany. Ny mpitarika ny Cenation dia manana trano fandraisam-bahiny ao amin'ny tranony. Ao amin'ny Total Bellas dia nilaza i Brie Bella fa ny trano fandraisam-bahiny dia mitovy habe amin'ny tranon'i Daniel Bryan any Aberdeen, Washington, izay kasain'izy ireo hitaiza ny ankohonany.
Marina izany. Ny mpitarika ny Cenation manana trano fandraisam-bahiny ao amin'ny tranony. Ao amin'ny Tsara tanteraka, Brie Bella dia nilaza fa ny trano fandraisam-bahiny dia mitovy habe amin'ny tranon'i Daniel Bryan any Aberdeen, Washington, izay kasain'izy ireo hitaiza ny ankohonany.
Raha liana ny hahita bebe kokoa ny fomba fiaina sy ny trano fonenan'i Cena sy Nikki ianao dia mety ho liana amin'ny fanarahana Salama tanteraka.
Ny seho dia manomboka amin'i Daniel Bryan, Brie Bella, rahalahin'i Kella sy kambana Bella nifindra tao amin'ny tokantranon'i Cena mba hanampy hikarakara an'i Nikki noho ny ratra nahazo azy teo amin'ny hatoka ary koa nanampy azy tamin'ny dingan'ny fanarenana.
Ho gaga ianao mahita ny fitsipiky ny Cena sy ny fomba fiainany ary mampiaina ny hafa ao amin'ny trano be. Raha ny Divas tanteraka SY Salama tanteraka mahazo rap ratsy, mbola mendrika hijerena azy ireo izy ireo.
Fiara John Cena:
John Cena miaraka amin'ny iray amin'ireo fananany sarobidy
Ny filohan'ny Cenation dia be fitiavana amin'ny fiara. Araka ny efa nolazainay, izy sy Nikki Bella dia mankafy ireo zavatra tsara kokoa amin'ny fiainana, izay azony ara-dalàna. Na izany aza, toa manana fanatisme kely momba ny fiara i Cena. Izy no manana ny fanangonana fiara tsy mampino indrindra, ary saro-piaro azy isika rehetra! Ity ny fenon'ny garazy Cena:
1966 Dodge Hemi Charger,
Masinina mpikomy AMC 1970
Mpitsara Pontiac GT tamin'ny taona 1970
1971 Mpihazakazaka amin'ny lalana Plymouth
2007 Ford Mustang Saleen Parnelli Jones Edisiôna voafetra,
Hamaky bebe kokoa: Ny fanangonana fiara tsy mampino an'i John Cena misy sary
Ny fitiavany ny fiotazam-boaloboka dia nahatonga azy hampiasa ny 1971 AMC Hornet SC / 360 isan'andro raha any an-trano izy. Lehilahy tia tanindrazana izy, tiany ny mijanona amin'ireo fiara amerikana kilalao hozatra. Ny fiara voalohany izay nalain'i Cena dia ny Cadillac Coupe DeVille tamin'ny 1984. Mazava ho azy fa efa lasa lavitra be izy nanomboka teo
Ny fisehoan'i Cena miavaka indrindra amin'ny fiarany dia ny epic Wrestlemania 23 fidirana raha nandeha avy teny amin'ny araben'i Detroit, Michigan izy, namakivaky ny kianja sy fitaratra mankamin'ny fidirana amin'ny Ford Mustang. Esory eto ny fidirana epika
Na dia ao amin'ny Wrestlemania 22 aza, ny mpiambina an'i Cena (iray izay CM Punk) dia niditra tamin'ny fiara 1940 tamin'ny fomba Chicago izay solontenan'ny andron'ny jiolahim-boto Al Capone.
Hatramin'izay dia mbola tsy nahita azy niditra fiara mihitsy isika, na dia nandritra ny taona maro aza dia nahita an'i John Cena tamin'ny fidirana tena mahavariana tokoa izahay tamin'ny dingana lehibe indrindra tamin'izy rehetra. Raha ny filazan'ny WWE, ny fidirana Cena's Wrestlemania 23 no lafo indrindra tamin'io fotoana io, mitentina hatrany amin'ny $ 100,000.
Raha liana ny hahita bebe kokoa ny fomba fiaina sy ny trano fonenan'i Cena sy Nikki ianao dia mety ho liana amin'ny fanarahana ny Total Bellas. Ny seho dia natomboka tamin'i Daniel Bryan, Brie Bella, rahalahin-kambana sy kambana Bella nifindra tao amin'ny tokantranon'i Cena mba hanampy hikarakara an'i Nikki noho ny ratra nahazo azy teo amin'ny hatoka ary nanampy azy tamin'ny fizotran'ireo fanarenana ihany koa. jereo ny fitsipiky ny Cena sy ny fomba fiainany ary mahatonga ny hafa honina ao amin'ilay trano be. Na dia manana rap ratsy aza ny Total Divas sy Total Bellas, dia mbola mendrika hijerena ihany izy ireo.
Ho an'ny WWE News farany, mpitsidika sy tsaho mitsidika ny faritra Sportskeeda WWE.
inona no hatao rehefa tsy mahatsapa ianao hoe tiana
amin'ny firy no manomboka ny vola any amin'ny banky?
iza no nifidy an'i addison rae
Ahoana no ho mafy orina eo amin'ny fiainana
kilasy ho an'ny mpivady hiarahana